Ukuhlobisa yokugezela plastic panel - amahle, fast and elula
Noma yimuphi ukulungisa ihilela izindleko. Indlu yangasese ikhathazekile kwasekuqaleni, ngoba umsebenzi kuhilela ukusetshenziswa sasivumela ezibizayo ebheke izinto. Shintsha isimo ngeke uqede yokugezela Igumbi odongeni panel.
Lokhu kwaziswa yokuqedela yesimanje esanda kutholakala, kodwa ongancintisana eside ziphumelela Tile Ceramic.
Ngosizo yesimanje odongeni panel kungaba ngokushesha futhi kalula ukushintsha isikhala elingaphakathi. Basuke esetshenziselwa kokuphothula Uphahla lwangaphakathi, izindonga, ukudala yayinamakhothamo, amakholomu kanye ngodonga. Ziyakwazi kulula ukufaka futhi ahlukanisa, futhi impahla ingasetshenziswa ngokuphindaphindiwe nge handling emnene. Ngakho, qeda yokugezela ngamapulangwe amakamelo, isithombe okuyinto sifanekise ngokuphelele lesi sihloko, ke ingenye indlela elula kakhulu futhi esheshayo ukushintsha emaqaqasini ekamelweni elincane.
Amafomu kanye nezinhlobo odongeni panel
Kunezinhlobo eziningana panel:
• Tile bafaniswe labo abenziwe ngesimo izikwele, ngosizo lwabo kungenzeka kalula babeka yimuphi umfanekiso;
• yokubeka Usisiza, okuyizinto komzila eside;
• ishidi, kunciphisa inani amalunga omzimba.
Ngo womshini indwangu esetshenziswa:
• fibre ibhodi;
• izinkuni zemvelo;
Ukuhlobisa yokugezela plastic panel - ukhetho best kuzo zonke izinhlobo amathayela wesimanje. PVC panel kunezimo eziningi, enye yazo - inkathi sasivumela eside ukusetshenziswa. Ngaphezu kwalokho, zingabantu engangenwa umlilo, akusho ziwohloka contact ngamanzi, ba kulula anakekele. Zingasetshenziswa ngaphansi nokushintshashintsha kwezinga lokushisa esingeqile degrees 20.
Ukukwenza umkhuba omuhle, ngokuvamile isetshenziswa ebusweni abushelelezi iphaneli bangase balingise ukhuni noma ngamatshe. Kusukela umonakalo kanye nomswakama ke ivikelwe ungqimba matt noma ephezulu isicwebezelisi ukuvenisha. PVC panel bafa kalula, ngakho ukufakwa bangathola izinto usayizi edingekayo.
Ukuhlobisa panel yokugezela plastic ekhiqizwa ngokushesha okukhulu. Ukusebenzisa izinto akudingi zangaphambi ukuqondanisa izindonga noma ezinye nokulungiselela surface ezengeziwe. Yebo, futhi inqubo yokufaka lula kunalokho laying tile Ceramic. Igebe phakathi odongeni amapuleti lincane kakhulu, isikhala eziyigugu ngakho isikhala esincane elahlekile.
Ngaphezu kwalokho, kokuphothula panel yokugezela plastic uyosindisa ibhajethi umndeni kahle ngenxa yezizathu eziningana:
1. PVC panel siphansi in izindleko.
2. Azikho izindleko izinto ezihambisana (i-glue, usimende, ukhonkolo).
3. Ukufakwa panel silula futhi Akudingi amakhono akhethekile.
Ayaziwa Pleasant panel epulasitiki Ukukhetha kwabo omkhulu futhi ezihlukahlukene amaphethini. Abakhiqizi ukukhiqiza impahla ukuthi ilingisa ukhuni, imifekethiso, itshe, amibalabala nokuningi. Ngakho-ke, saqeda yokugezela plastic panel - lokhu akulona nje umsebenzi ezejwayelekile wokwakha kunqubo, lapho ungabonisa umcabango futhi ubuntu.
Nokho, ukusetshenziswa PVC panel kuhilela lula ukubanakekela. ku yokuhlanza yokugezela kuyehla kube okungenani, kusukela noma yikuphi ukungcoliswa isuswa amanzi ezivamile futhi ngendwangu emanzi.
Ngakho-ke, ukusetshenziswa panel odongeni plastic endlini yangasese - kungcono isixazululo ezinhle ngempela.
Wall-agibele amahhashi isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu. Amafomu nesiqondiso lapho ukhetha amapayipi
Yini ukukhetha: yangasese ezimfushane noma yangasese uhlanganyela nge ukufakwa?
Umcamelo Bath - induduzo lula
Bangaki amazinyo ikati enayo, ingahlanzwa kanjani?
'Ukulawula Deo-' Cream - isiqinisekiso ngokuzethemba.
Ukusekela ukugibela izitshalo kusuka edayisa izinsimbi materials
"Wheel Ferris": ukuzijabulisa senzuzo
Kanjani ukuze uthole inombolo ye-VAT?
Gun Khweza "Into 261"
"Peugeot 207": ukubuyekezwa. Peugeot 207: Ukucaciswa, izithombe
UMsindisi Church (Ufa): ikheli, ucingo and Rehabilitation Center